Vaovao Faramparany avy any Eoropa
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Maresaka Momba An’i Eoropa
Mpivavaka be ny olona tany Eoropa taloha, fa tsy toy izany intsony amin’izao. Mety ho gaga anefa ianao fa misy ifandraisany amin’ny Baiboly ny vaovao tany vao haingana.
Mahasoa ny Feon’ny Reny
Hitan’ny mpikaroka any Milan, any Italia, fa misy vokany eo amin’ny fahasalaman’ny zaza teraka tsy tonga volana ny fandrenesany ny feon’ny reniny. Fitaovana apetaka eo amin’ny hatotanany no ampitana an’izany, amin’ilay izy mbola any amin’ny hopitaly iny. Maheno ny feon’ny reniny ny zaza rehefa ao am-bohoka, ary mitovitovy amin’izany io teknika io. Nilaza ireo mpikaroka fa “mahasoa ny zaza teraka tsy tonga volana ny maheno ny feon’ny reniny raha vao teraka izy.”
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Efa nampitony sy nifehy ny faniriako aho, toy ny zaza efa nisara-nono eny amin-dreniny.”—Salamo 131:2.
Fitaizana Mampirisika ny Ankizy ho Tia Tena
Nisy fanadihadiana natao tamin’ny ankizy holandey 565. Nolazain’ny ray aman-dreniny hoe “miavaka kokoa noho ny ankizy hafa” izy ireo, ary tokony “hiangarana.” Hita fa tia tena kokoa ireo ankizy ireo sady mihevitra ny tenany ho ambony. Hoy ny iray tamin’ireo nanao fanadihadiana: “Tena mino ny ankizy rehefa tenenin’ny ray aman-dreniny hoe miavaka noho ny ankizy hafa. Mety tsy hahasoa azy ireo sy ny fiaraha-monina anefa izany.”
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Izao no lazaiko amin’ny olona rehetra eo aminareo: Aza mihevi-tena mihoatra noho izay tokony hoheverina, fa rehefa mieritreritra kosa, dia mba ataovy tanjona ny ho tonga olona misaina tsara.”—Romanina 12:3.
Zato Taona fa Mbola be Fanantenana
Mbola te ho velona ny olona efa 100 taona, na dia marary sy tsy afaka manao zavatra firy aza. Izany no tatitra nataon’ny mpikaroka ao amin’ny Oniversiten’i Heidelberg any Alemaina. Mbola te hiaina sy miezaka hankafy fiainana ny telo ampahefatr’ireo 100 taona nohadihadina. Manatratra tanjona izy ireo, be fanantenana sy mijery lafy tsaran-javatra, mahatsapa hoe misy dikany ny fiainana, ary mbola mifikitra amin’ny zavatra inoany sy amin’ny fitsipika momba ny fitondran-tena.
ERITRERETO IZAO: Nahoana isika no te ho velona foana, rehefa jerena ny Mpitoriteny 3:11?